ALAHADY FAHAROA FANKALAZANA NY PAKA -TAONA D -28 APRILY 2019 | FKMP
ALAHADY FAHAROA FANKALAZANA NY PAKA -TAONA D -28 APRILY 2019
Ny harivan’ilay andro voalohan’ny herinandro, raha nirindrina ny varavaran’ny trano nivorian’ny mpianatra noho ny fahatahorany ny Jody, dia tonga i Jesoa ka nitsangana teo afovoany, sy nilaza tamin’izy ireo hoe; “Ho aminareo anie ny fiadanana!” Nony efa nilaza izany Izy, dia nasehony azy ireo ny Tanany sy ny Tratrany, ka faly ny mpianatra fa nahita ny Tompo. Dia hoy indray Izy tamin’izy ireo: “Ho aminareo anie ny fiadanana! Tahaka ny nanirahan’ny Raiko Ahy no anirahako anareo koa”. Rehefa nilaza izany Izy, dia nitsoka ka nanao tamin’izy ireo hoe: “Raiso ny Fanahy Masina: ny fahotana izay havelanareo dia ho voavela, ary izay hotananareo dia ho voatana”. Fa i Tômà ilay atao hoe Didimo, anankiray tamin’ny roa ambin’ny folo lahy kosa, tsy mba tao amin’izy ireo tamin’ny nahatongavan’i Jesoa. Ka hoy ireto mpianatra sasany taminy: “Efa nahita ny Tompo izahay. Fa hoy izy tamin’ireo: “Raha tsy hitako ao amin’ny tanany ny loaky ny fantsika ka atsofoko eo amin’ny loaky ny fantsika ny rantsan-tanako ary atehiko amin’ny tratrany ny tanako dia tsy hino aho”.
Nony afaka havaloana, raha mbola nivory tao an-trano ihany ny mpianany sady teo koa i Tômà, dia tonga i Jesoa, nefa nirindrina ny varavarana. Nitsangana teo afovoany Izy ka nanao hoe: “Ho aminareo anie ny fiadanana!” Ary hoy Izy tamin’i Tômà: “Ataovy eto ny rantsan-tananao, ka zahao ny tanako, ary arosoy ny tananao, ka atehefo eto amin’ny tratrako; dia minoa, fa aza malain-kino”. Dia namaly i Tômà ka nanao taminy hoe: “Tompoko sy Andriamanitro!” Fa hoy i Jesoa taminy: “Nino ianao, ry Tômà, satria nahita Ahy; sambatra izay tsy nahita ka nino”. Maro koa ny fahagagana hafa nataon’i Jesoa teo imason’ny mpianany, no tsy voasoratra amin’ity boky ity. Fa voasoratra ireto mba hinoanareo fa i Jesoa no Kristy Zanak’Andriamanitra, ary mba hahazoanareo ny fiainana amin’ny Anarany, amin’ny finoana Azy.
Ity Alahady faharoa amin’ny fankalazana ny Paka ity dia antsoina hoe Alahadin’ny famindram-pon’Andriamanitra. Mpamindra fo sy mpamela heloka Andriamanitra ary irin’Izy tompoo isika hiaina izany famindram-po sy famelan-keloka izany isan’andro. Nomen’i Jesoa fahefana hamela heloka ny mpianany araka ny Evanjely androany : « Raiso ny Fanahy Masina, ny fahotana izay avelanareo dia ho voavela ary izay hotananareo dia ho voatana » . Mba hiainantsika isan’andro izany famelan-keloka izany dia nataon’ny Tompo ho famantarana hita maso (Sacrement) ny fitiavany sy ny famindram-pony ny famelan-keloka amin’ny alalan’ireo voahosotra dia ny pretra izany, fahefana miampita sy ifandovana ao amin’ny Eglizy nanomboka tamin’ireo apostoly. Enga anie isika hiaina isan’andro ny famindram-pon’Andriamanitra, handray ny Sakramentan’ny fampihavanana ary hahay hamindra fo sy hamela ny heloky ny hafa.
Previous Post: PAKA HOE …
Next Post: ALAHADY FAHATELO FANKALAZANA NY PAKA D -05 MAY 2019